VAKY BANTSILANA : Voageja anaty fahafahana… | NewsMada
Fahafahana !…Teny tsy afaka am-pon’ireo nitolona ho an’ny tanindrazana teo ambany vahohon’ny mpanjanaka ary mbola eo am-bavan’ny ankehitriny sy ijoroana. Eo amin’ny fiainam-pirenena, zovy no tsy mangetaheta azy io, tsy vitsy koa, ireo mikatsaka azy ho an’ny firenena, mba tsy horombahin’ireo mpanani-bohitra sy ireo voaibe fahavalom-pirenena. Anjaka ve ny fahafahana raha ny vahiny hatrany no mibaiko ny hoavin’ny fiainam-pirenentsika ? Tsy hoe nahazo ny fahaleovantena akory isika fa niverina amintsika Malagasy ny fahaleovantenan’i Madagasikara. Mby aiza tokoa izany amin’izao vanim-potoana iainantsika izao ?
Ireo mpamatsy vola iraisampirenena no mibaiko ireo mpitondra, ny amin’ny teti-panorony. Tsy mba tsontsam-paika ka ho matim-bela amin’izay ataony izy ireo. Mody lazainy fa mila tsinjovina ny fiainam-bahoaka ka maro ireo fepetra takin’izy ireo. Anisan’izany ny fampiakarana ny fidiran-ketra, tonga hatrany amin’ny fitakiana hetra ny alika hoenti-mampandroso ny firenena ? Ny fanitsiana tena izy ny vidin-tsolika, ny ady amin’ny kolikoly, ny fampihenana ny fanampiana ireo orinasam-panjakana, toy ny Jirama, Air Mad, sy ny maro hafa… Andaniny izany, manao tsy omby aloha ireo vahiny tonga mitsidika eto, hikatsaka izay tombontsoany. Ankilany, izao voageja anaty fiakaran’ny vidim-piainana izao ny firenena, ka savolaina ny vodiahitrarivo. Omby iray manaraka ny omby arivo ny vahoaka ary tsikirity momba fody ka tsy tompon-dia fa mpanaraka ihany…
Vokatry ny fidangan’ny vidim-piainana, tafiditra anaty fahasahiranana lalina ny vahoaka. Eo ny mpitondra tsy mahatana ny teny izay lazainy sy ataony. Mpitari-bato vilam-bava angaha, ka hafa ny tondroin’ny tanany ary hafa ny tondroin’ny molony. Natao litania sy nireharehana ny fahazoana vola amina miliara. Inona ny asa ho atao sy tanterahina sa hiandry fanagejana hafa vao hikofokofoka ? Sao ho ela fievoka ka ho may lamba na ho sanatria tratran’ny ampitso ampitso lava. Na hanao kabary tsara mitsangana sy vava tsara milahatra eo aza ny mpitondra, tsy maintsy voagejan’ny trosa ireo zanaka amam-para.
Tsy hisy ny fahafahana vanona raha tsy mitoetra ny tena fandriampahalemana. Manjaka ny jiolahy, mahazo vahana ny fitsaram-bahoaka. Manaony ny ataony ireo dahalo mpandroba sy ny dahalo ambony latabatra. Malaza tsy ihinanana toa vilian-tsahona ny tena fahafahana satria na ny mody harivariva aza, efa tsy milamin-tsaina intsony sao voaendaka. Ireo heverina ho tandroka aron’ny vozona aza, misy mitsikomba amin’ny mpanao ratsy. Manjaka ny kolikoly, sy ny fanjakana ananan-kavana, ny kiantranoantrano. Voageja anaty fahalovana ny firenena. Tsy ho vanon-ko firenena ny firenena, raha tsy mazava ny fandraisana andraikitry ny mpitondra. Tsy hiandry vahiny vao hahavita zavatra. Anarany mba niverina tamintsika ny fahafahana, saingy raha dinihina lalina, fahafahana voageja…